Abavelisi kunye nabanikezeli be-Multi-functional
Metal Cable ndlala (Metric intambo)
Sinokubonelela ngeentsimbi zekhebula zentsimbi ezenzelwe ikhusi elenziwe nge-nickel-plated (Umyalelo wenombolo: HSM-KZ), intsimbi engenasici (i-Order No.: HSMS-KZ) kunye ne-aluminium (i-Order No.: HSMAL-KZ).
Sinokubonelela ngeentambo ze-EMC ezenziwe ngobhedu olwenziwe nge-nickel-plated (i-odolo yenombolo: i-HSM-EMV.T), intsimbi engenasici (i-odolo yenombolo: i-HSMS-EMV.T) kunye ne-aluminium (i-odolo yenombolo: HSMAL-EMV. T).
Sinokubonelela ngeentambo ze-EMC ezenziwe ngobhedu olwenziwe nge-nickel-plated (i-odolo yenombolo: i-HSM-EMV.SC), intsimbi engenasici (i-odolo yenombolo: i-HSMS-EMV.SC) kunye ne-aluminium (i-odolo yenombolo: HSMAL-EMV. SC).
Sinokubonelela ngeentambo ze-EMC ezenziwe ngobhedu olwenziwe nge-nickel-plated (i-odolo yenombolo: i-HSM-EMV), intsimbi engenasici (i-odolo yenombolo: i-HSMS-EMV) kunye nealuminiyam (i-odolo yenombolo: HSMAL-EMV).
I-High-temp Metal Cable Gland ene-Multi Cores (Metric / PG intambo)
Sinokukunika intambo yesinyithi esinyibilikayo esinee-cores ezininzi ezenziwe ngobhedu olwenziwe nge-nickel (Umyalelo wenombolo: HSM.DS-M / nxd), intsimbi engenasici (i-odolo ye-HSMS.DS-M / nxd) kunye i-aluminium (Inombolo yoMyalelo: HSMAL.DS-M / nxd).
EMC High-temp Metal Cable ndlala kunye Core Single (Metric intambo)
Sinokubonelela nge-EMC ephezulu yesantya seentsimbi zentsimbi ezinesiseko esinye esenziwe nge-nickel-plated copper (Order No .: HSM.DS-EMV.SC), intsimbi engenasici (i-odolo nombolo: HSMS.DS-EMV.SC) kunye nealuminium (Umyalelo wenombolo: HSMAL.DS-EMV.SC).